I-Apple Pay ifika ngokusesikweni kubathengi beCaixaBank kunye ne-Imaginbank! | Ndisuka mac
Sinethamsanqa kuba ngaphambi kokuphela konyaka, abathengi beCaixaBank kunye neImaginbank baya kuba nenketho yokusebenzisa iApple Pay xa bethenga ngezixhobo zonke ezifanelekileyo. Emva kokuqinisekiswa ngokusesikweni kwequmrhu kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo apho ukuphunyezwa kwale nkonzo kubaxumi bayo kwenziwa ngokusemthethweni ngo-2017, namhlanje ukumiliselwa kwayo kuqinisekisiwe kwaye ngoku kunokwenzeka ukongeza amakhadi ukuhlawula ngeApple Pay.
Ke bonke abathengi beCaixaBank kunye neImaginbank ngoku banokuqala ukufaka amakhadi abo etyala kwisicelo seWallet kwaye basebenzise le ndlela yokuhlawula. Ezi ziindaba ezimnandi kakhulu kwizigidi zabathengi into enayo kwilizwe lethu, y ngokusemthethweni iba yibhanki yesibini emva kweSantander ukubonelela ngale nkonzo yentlawulo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, abathengi abaninzi bezinye izinto ngoku babona ngokuqinisekileyo "isantya" ekuthi ngaso ukubhengezwa kwentlawulo nge-Apple Pay kubhengezwe kubathengi beLa Caixa ababone ukukhululwa ngokusemthethweni kweli hlobo linye kwaye sele benayo inkonzo ekhoyo. Oku kuthetha ukuba ucango luvulela onke amaziko ngoko nangoko.
Ngale ndlela, kubalulekile ukuba abathengi babe ne-ImaginBank (njengoko kunokubonwa kumfanekiso ofakwe ngumlingane wethu uMiguel) okanye iCaixaBank. Amanyathelo amanye amaziko kufuneka abe kwangoko kwaye uthethathethwano kunye neApple malunga nokuphunyezwa kwale ndlela yokuhlawula ikhuselekileyo, ikhawulezayo kwaye isebenza ngokufanelekileyo kufuneka ikhawuleze kwaye ngakumbi ngoku ekubeni iibhanki ezimbini ezinkulu sele zibonelela ngale nkonzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Pay ifika ngokusesikweni kubathengi beCaixaBank kunye ne-Imaginbank!
I-Yudonpay ihlaziywa ukuze ukwazi ukulawula amanqaku akho kunye nezipho ngokulula